Wadne Qabad (Heart Attack)
Author Topic: Wadne Qabad (Heart Attack) (Read 34252 times)
« on: February 10, 2008, 12:06:32 AM »
Wadne qabad waxaa kaloo loo yaqaannaa Myocardial infarction ama MI.
Wuxuu dhacaa markii xididka quudiya muruqa wadnaha uu xannibmo. Socodka dhiigga ayaa ka joogsada qayb wadnaha ka mid ah, Haddii aan isla markiiba la daaweyn, qaybtaan muruqa wadnuhu way dhimataa. Nabar ayayna isku badashaa.
Xannibanku wuxuu ka imaan karaa:
Isu ururka dufan.
Isku kaduudasho aan caadi ahayn ee muruqa marinka dhiigga, tanoo ciriir ka dhigto xididka.
Calaamadaha Wadne Qabadka
Xanuun ama cadaadis kaa qabta bartamaha feedhahaaga, gacanta, daanka, garbaha, qoorta ama caloosha. Waxaa laga yaabaa inuu meel ka tago oo meelo kale ku faafo.
Dareemidda ciriiri, bur-bur, xanuun, margasho, maroojin, gubasho ama wadnaha oo ku gubanaya.
Wuxuu dhacaa waqtiyada hawlaha iyo waqtiyada nasashada labadaba.
Wuxuu socdaa in ka badan 15 daqiiqadood
Dadka qaar xanuunka wuxuu ku billawdaa garabka illaa gacanta bidix oo kabuubyo ka dareemaan ama xanuun maroojis oo kale ah, Dadka qaba sonkorowga waxay halis ugu jiraan inuu wadna qabad ku dhaco iyagoo wax calaamado ah aysan dareemin.
Waxaa wadne qabadka halis ugu jira:
Dadka cayilan oo aan jimisiga samaynin
Dadka ku nool nolosha aan dhaqadhaqaaqa badan lahayn
Dadka qabo xanuuno xinjiroobis dhiig oo aan daawo u qaadan
Dadka qaba sonkor aanan kontroolnayn
Dadka qaba dhiig-kar aan lala socon
Dadka qaba cudurka dufanka dhiigga ee Kolestarool.
Wuxuu xanuunka wadna qabad-ka ku badan yahay dadka waaweyn.
Isla markiiba aad dhakhtar haddii aad qabtid mid ka mid ah calaamadaha kor ku xusan.
Fariiso ama seexo ilaa uu kaaga yimaado qof isbitaalka kuu kaxeeyo.
Baabuur ha u wadanin in aad isbitaalka ku aaddo ama dib ha u dhiganin in aad wacdo dhakhtarkaaga.
Talooyin iyo Warbixinno:
Wadnuhu wuxuu ku soo bogsadaa dhowr bilood.
Aad ballanta uu dhakhtarkaagu ku dabagalayo arrinka.
Hawlahaaga xaddid ilaa 4-6 toddobaad.
Maalin kasta naso.
Hawlahaaga waqti ka waqti u sii kordhi.
Naso 1 saac ka dib markaad cunnu cuntid iyo ugu yaraan 30 daqiiqadood kadib qubeysiga, mayrashada ama xiirashada ka dib.
Xaddid jaranjaro fuulidda. Jaranjarada si gaabisa u qaado.
Ka fogow qaadidda wax ka badan 10 pounds ama 4.5 kiilo garaam.
Wax ha xaaqin, caws ha jarin, geed ha qaadin ama wax ha falin. Shaqooyinka fudud waad sameyn kartaa.
Dhakhtarkaaga weydii goorta aad baabuur wadi karto iyo goorta aad shaqada ku noqon karto. Waxaad masaafooyin dhow u fuuli kartaa baabuur.
Hawlaha galmada waa la soo celin karaa markaad awooddo in aad fuuli karto ilaa 20 jaranjaro adigoon dhibaato ku qabin.
Raac cuntada ay dhakhtarkaaga iyo cunto qoruhu kuu soo jeediyaan.
Cun cuntooyinka dufanku ku yar yahay.
Ka fogow cuntooyinka cusbada leh.
Maalin walba is miisaan si aad u hubisid in dheecaan jirkaaga kugu kordhayo (wadnaha uusan biyaha jirka uga saaraynin).
Dheecaan dheeraad ah wadnahaaga shaqada ayuu ku sii adkaynayaa.
Wac dhakhtarkaaga haddii ay kugu kordhaan 2-3 pounds ama 1 kiilo garaam oo miisaan dheeraad ah.
Ka fogow heerkullada aadka u kulul ama aadka u qabow.
Ha ku mayran biyo kulul ama qabow.
Guriga joog waqtiga cimilada huurka leh ama heerkullada aadka u kulul.
Ka fogow Galmada illaa uu dhakhtarka kaaga fasaxo
Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo talooyin intaa ka badan.
Akhriso Wadne Gariirka: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=1423.0
Views: 6321 June 27, 2008, 06:27:54 AM
Views: 2972 June 01, 2016, 09:15:36 PM
Views: 4092 March 13, 2008, 12:28:59 AM
Views: 4801 May 24, 2009, 09:48:35 PM
Views: 57919 December 18, 2007, 01:08:59 AM